ODD 4 - Fanabeazana tsara kalitao - Tily eto Madagasikara
ODD 4 - Fanabeazana tsara kalitao
Manan-jo hahazo fanabeazana tsara avokoa ny rehetra, satria zava-dehibe indrindra hiatrehana ny ho avy rahatrizay ny fahazoana fanabeazana tsara kalitao, na any an-tsekoly na ivelan’ny sekoly, isan’izany ny skotisma.
Tanjona 4 : Miantoka ny fahazoan’ny rehetra fanabeazana tsara kalitao, amin’ny fomba sahala sy mampiroborobo ny fahafahana mianatra mandritry ny fiainana.
4.1 Mandrapahatongan’ny 2030, manaraka ny zotram-pibeazana feno sy maimaim-poana ary tsara kalitao amin’ny ambaratonga voalohany sy faharoa ny ankizilahy sy ankizivavy, atao izay hisitrahany izy ireo an’ izany amin’ny fomba sahala hahatonga azy handrato fahalalalana sy fahaizana tena ilaina .
4.2 Mandrapahatongan’ny 2030, atao izay hisitrahan’ny ankizivavy sy ny ankizilahy sahanasa famohazan-tsaina, sy fandraisana an-tanana ny vanimpotoanan’ny fahazazana ary indrindra fanomezana azy fanabeazana tsara kalitao mialoha mba hahafahany miatrika ny fianarana any amin’ny ambaratonga fototra.
4.3 Mandrapahatongan’ny 2030, atao izay hisitrahan’ny vehivavy sy ny lehilahy amin’ny fomba sahala, fampianarana teknika, arak’asa, izay tsara kalitao sy taka-bidy , tafiditra amin’izany ny fandratoam-pianarana eny amin’ny anjerimanontolo/oniversite.
4.4 Mandrapahatongan’ny 2030, ampitomboina marobe ny isan’ny tanora sy olondehibe manana fahaizana, indrindra fahaizana ara-teknika sy arak’asa, ilaina amin’ny tsenan’ny asa sy amin’ny fahazoana asa mendrika ary amin’ny fandraharahana.
4.5 Mandrapahatongan’ny 2030, manafoana ireo tsy fitoviana eo amin’ny vehivavy sy ny lehilahy amin’ny sehatry ny fanabeazana ary miantoka ny fahazoan’ny olona marefo, indrindra ny olona manana fahasembanana, ny teratany, ny ankizy anaty fahasahiranana misitraka ireo ambaratongam-pampianarana sy fampiofanana arak’asa.
4.6 Mandrapahatongan’ny 2030, atao izay hahaizan’ny tanora rehetra sy olondehibe maro, lahy sy vavy, mahay mamaky teny sy manoratra ary mikajy.
4.7 Mandrapahatongan’ny 2030, atao izay hananan’ny mpianatra rehetra fahalalana sy fahaizana ilaina hampiroboroboana ny fandrosoana lovainjafy: indrindra ny fanabeazana manome lanja ny fandrosoana sy fomba fiaina lovainjafy, ny zon’ny olombelona, ny fitovian’ny vavy sy ny lahy, ny fampiroboroboana ny kolontsain’ny fandriampahalemana sy ny fanalavirana ny herisetra, ny maha olon’izao tontolo izao, ny fahitana ny lafin’ny tsara amin’ny fahasamihafana ara-kolontsaina, ary ny anjarabiriky ny kolontsaina amin’ny fandrosoana lovainjafy.
4.a Manorina toeram-pianarana mifanaraka amin’ny ankizy, ny olona manana fahasembanana, mety amin’ny lahy sy ny vavy na atao izay hanajariana ireo toeram-pianarana misy ho tahaka izany, manome seha-pampianarana mahefa sy azo antoka, lavitry ny herisetra ary ho an’ny rehetra.
4.b Mandrapahatongan’ny 2020, manerantany, ampitomboina betsaka ny isan’ny vatsimpianarana omena ny firenena andalam-pandrosoana, indrindra ireo firenena tsy dia mandroso sy ireo fanjakana nosy an-dalam-pandrosoana, ireo firenena aty Afrika, hanohanana ara-bola ny fanarahana ny fianarana ambony, tafiditra anatin’izany ny fiofanana informatika, teknika, siantifika, ny fandalinam-pahaizana ho injeniera any amin’ny firenena mandroso sy ireo firenena hafa an-dalam-pandrosoana
4.c Mandrapahatongan’ny 2020, atao izay hahamaro an’isa ny mpampianatra matihanina, amin’ny alalan’ny fiarahamiasa
iraisam-pirenena mikasika ny fanofanana mpampianatra amin’ny firenena an-dalam-pandrosoana, indrindra ho an’ny
firenena tsy dia mandroso, sy ny firenena nosy kely an-dalam-pandrosoana.
Jamboree 2023 : Tandremo voalohany!
Tapaky ny Fivoriambe faha-41 notanterahin’ny Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) tany Baku (Azebaidjan) ny taona 2017, fa ny Repoblikan’i Korea Atsimo no hampiantrano ny Jamboree faha-25, ny 1 hatramin’ny 12 Aogositra 2023. ao amin’ny tanàna antsoina hoe SaeManGeum, Jeollabuk-do. Inona no atao hoe Jamboree ? Ny Jamboree dia hetsi-panabeazana iraisam-pirenena karakarain’ny OMMS isaky ny […]
Hira fanekena skoto
Tonony + solfa + feony.
« Tena ilaina sady azo itokisana ary maharaka ny fivoaran’ny teknolojia misy ny Menafify ». Manaraka ny Politika Nasionaly fanabeazana Tily eto Madagasikara ny Fandaharam-panabeazana Menafify. Fandaharana atolotra Tontolo iainana andavan’andro mihitsy no atrehan’ny Menafify ka ahitana Fihariana sy fitadiavana, Fiainam-piaraha-monina samihafa ary tontolo ivelaran’ny fanatontoloana. Noho izany, ny fandaharam-panabeazana atolotra dia : Manomana ny […]
Mandalo vaninandro miavaka izao tontolo izao ka niteraka fiovana goavana maro teo amin’ny fomba fiainantsika toy ny fihibohana nandritra ny fotoana maharitra, ny fitafiana arotava lasa fitafy andavanandro, ny tsy fahafahana mivory sy mifampitakosona. Isan’ny tena iharan’izany indrindra ny skotisma, izay tena miaina ny fiainana ankalamanjana sy ny fiainam-bondrona. Tsy sakana amin’ny fivelaran-tenan’ny tsirairay nefa […]
Hira Fanekena lovitao
Manaiky aho, tsy anio ihanyFa hiezaka hatranyHitia Anao ry RayAndriamanitro hatrizay Manaiky aho, tokoa tokoaFa hiasa an-kerim-poHo an’ny tany mamikoMadagasikara taniko Isan’andro aho hazotoHanampy olona hilofoKa ho toaviko ao am-poIreo lalàna an-kiroa
← Lahatsoratra vaovao1 2 Lahatsoratra taloha →